Gobolka Astrakhan wuxuu tixgelinayaa suurtagalnimada in la dhiso warshad loogu talagalay soosaarida shiilannada Faransiiska - majaladda "Nidaamka Baradhada"
Arbaco, Febraayo 24, 2021
Ugu weyn Dib u warshadaynta
в News, Dib u warshadaynta
Waftiga gobolka Astrakhan waxay kaqeybqaadeen kulan shaqo oo kadhacay gobolka Lipetsk ee kuyaala dhulka loo yaqaan Lamb Weston - Belaya Dacha plant. Ka qaybgalayaashu waxay ka wada hadleen rajada laga qabo hirgelinta mashaariicda maalgashiga ee wadajirka ah ee soo saarista shiilannada Faransiiska.
Dadka Astrakhan waxaa la tusay kan ugu weyn khadka CIS ee soo saarista shiilanta Faransiiska. Soosaarka casriga ee casriga ah ee Lipetsk wuxuu cunaa in kabadan 200 tan oo ah alaabta ceeriin. Warshaddu waxay leedahay saldhig ceyriin oo u gaar ah. Mid ka mid ah alaab-qeybiyeyaasha muhiimka ah ee alaabta ceeriin waa LLC MAPS, oo ku taal degmada Enotaevsky ee gobolka Astrakhan. Sidaa darteed, wax soosaarkan gudaha wuxuu gebi ahaanba daboolayaa soo dejinta shiilannada Faransiiska ee Ruushka.
Shirka ayaa looga hadlay suurtagalnimada in shirkad tan lamid ah laga helo gobolka Astrakhan. Iyo sidoo kale - kororka aagga hoostiisa baradhada gobolkan.
Source: Qodobka A
Tags: Gobolka AstrakhanWax soo saarka shiilan ee Faransiiska
Beeraleyda Mareykanka waxaa lagu qasbay inay jabsadaan cagafyada si ay u hagaajiyaan
Noocyo cusub oo baradho ah oo ay abuureen Chelyabinsk breeders ayaa lagu daray Diiwaanka Gobolka
Saamilayda "Belaya Dacha" hantida loo qaybiyay
Awoodda khudaarta waxaa lagu dalacsiiyaa Poland